Haweenka ku jira BFS waxay la hadlaan RW Rooble
By axadle	 On Jan 10, 2021
Haweenka haweenka ah ee ku jira Baarlamaanka Federaalka ayaa ra’iisul wasaare Maxamed Xuseen Rooble la wadaagay dareenkooda ku saabsan kuraasta ay ku leeyihiin baarlamaanka soo socda.
Rooble wuxuu soo bandhigay inuu sugo 30% kuraasta iyo mid ka mid ah saddexda kursi ee baarlamaanka, iyadoo lagu saleynayo qoondada haweenka ee Baarlamaanka Soomaaliya.
Intaas waxaa sii dheer, waxay ka cabanayaan qarashka ku baxaya doorashada kuraasta baarlamaanka Federaalka, oo ay sheegeen inay badan yihiin laakiin haweenka aan lagu soo darin ama ugu yaraan dowladda ay soo farageliso.
Wasiirka Wasaaradda Haweenka Soomaaliya Xaniifa Maxamed Ibraahim Xaabsade oo sidoo kale ah xubin ka tirsan Golaha Wakiilada BFS ayaa warbaahinta u sheegtay in R / wasaare Rooble uu ka aqbalay dalabkooda.
Waxay tilmaamtay in markii uu wadanku u dhaqaaqayo dhanka doorashooyinka ay sii cadeysay inuusan waayi doonin kuraasta haweenka iyadoo la xadidayo qoondada siyaasadeed ee ah 30%, si loo hubiyo in kuraasta haweenka la hormariyo
Ma ahan ciyaar kubada cagta ah, waan cabaadayaa.
Kenyan troops centered through IEDs through Al-Shabaab in